देशभर दैनिक संक्रमणको नया कीर्तिमानी कायम, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? - सिम्रिक खबर
देशभर दैनिक संक्रमणको नया कीर्तिमानी कायम, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
१६ असोज, काठमाडौँ । शुक्रवार नेपालमा हालसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमण देखिएको छ । आज २ हजार ७ सय २२ विरामीहरु थपिएका छन् । जुन हाल सम्म कै धेरै संक्रमित संख्या हो । यस अघि अधिकतम २०२० जना दैनिक संक्रमण संख्या थियो । स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा ३ हजार ३ सय ७ जना निको भइ घर गएका छन् । यसैगरी यस अवधिमा ११ जनाको निधन भएको छ ।
यसैगरी कोरोनाको हटस्पट बनेको उपत्यकामा शुक्रवार १६३८ जनामा कोरोना देखिएको छ । काठमाडौँ जिल्लामा १२८०, भक्तपुरमा १९६ र ललितपुरमा १६२ जनामा कोरोना देखिएकोे हो । यो सँख्या हालसम्मकै अत्याधिक हो । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८२ हजार ४५० पुगेको छ भने निको हुनेहरुको संख्या ६० हजार ६९६ पुगेको छ । त्यसैगरी ५२० जनाले यस भाइरसको कारण ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म १० लाख ४८ हजार ६८६ नमुना परिक्षण गरिएको छ भने ४८८५ जना क्वारेन्टीनमा रहेका छन् । त्यसैगरी सक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार २३४ रहेको छ । हेरौ कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ।